Xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Puntland oo la dhaariyay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandXildhibaanada cusub ee baarlamaanka Puntland oo la dhaariyay
January 1, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Qaar katirsan xildhibaanada cusub ee Puntland. [Isha Sawirka: Facebook]
Garoowe-(Puntland Mirror) Xubnaha xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Puntand ayaa maanta oo Talaado la dhaariyay kadib markii xalay la sii daayay liiskooda.
Dhaarinta oo ka dhacday xarunta aqalka baarlamaanka ee magaalada Garoowe ayaa waxaa kasoo qeybgalay dhammaan xildhibaanada.
Sida dhaqanka ah, xildhibaanada ayaa Xuseen Xaaji Yasiin oo ah xubinta ugu da’ weyn u doortay guddoomiye kumeelgaar ah.
Guddoomiyaha kumeelgaarka ah ayaa ka shaqayn doona sidii baarlamaanku ay guddoomiye rasmi ah u dooran lahaayeen saddexda beri ee soo socda.
Xildhibaanada ayaa intooda badani yihiin kuwo cusub oo dhalinyaro ah waxaana ku jirta hal xubin oo haween ah.
Liiska baarlamaanka cusub ee Puntland oo la sii daayay
Madaxweyne Paul Kagame oo ku guuleystay doorashada madaxtinimada Rwanda
Kigali-(Puntland Mirror) Madaxweynaha hadda talada haya ee Rwanda Paul Kagame ayaa guul ka gaaray doorashada madaxtinimada, isaga oo mar saddexaad ku guuleystay madaxweynenimada isaga oo awal 17 sanno Madaxweyne ahaa. 80 boqolkiiba codadka la tiriyay, [...]